Egwú - KingHOOD Gaseous System Co., Ltd.
KingHOOD Gaseous System bụ a nnyocha na mmepe nke elu-tech enterprise na aku ngwa nke VPSA oxygen akụrụngwa. Ịdabere na ọkachamara uru, ụlọ ọrụ nwere ihe magburu onwe management otu, na-nwere zuru okè ngwaike ụlọ ọrụ na ahụmahụ ọrụ otu. The zuru okè usoro na nke ezi uche management ana achi achi ụlọ ọrụ anyị kasị mma na akụkụ nile. KingHOOD-agba mbọ ka ihe niile di iche iche nke VPSA oxygen ngwá si nnyocha na mmepe, imewe, mmepụta, ahịa, metụtara ọrụ, na-enye oru na ndụmọdụ na ngwọta.
KinHOOD akwado ndị na-esonụ na-eduga ụlọ ọrụ na ụwa n'ihi na okwu:
1, Enterprise mmadụ akụ
Isi management na oru pesonel nke KingHOOD na-niile na-arụ ọrụ na gas akụrụngwa ụlọ ọrụ ihe karịrị 10 afọ, ha nile nwere otutu ọkachamara ahụmahụ. N'ihi na a ogologo oge, anyị chịkọtara na omume na otu akụkụ, site oru injinia na saịtị nleta, chọta nsogbu, ma melite technology ọzọ na ọzọ. N'otu oge ahụ, anyị ka na-elekwasị anya na ndị ụlọ ọrụ technology, ịmụta elu ahụmahụ.
2, Design & n'ichepụta ikike
Anyị injinia na-resposible niile imewe na ihe osise maka anyị mmepụta. Anyị beleivev elu technology bụ isi maka ụlọ ọrụ suatainable development. Ke adianade do, KinHOOD na-eme na-eleta na-eduga ụlọ ọrụ na ụwa n'ihi na okwu, nke bụ a ngwa ngwa n'aka rụọ technology. Site adpoting na world'd eduga technology ụlọ ọrụ ndị dị otú ahụ dị ka Flo Rida feat, Tosoh, na-ekwenyere ndị Chinese Academy of Science, South China University of Technology, Haicheng Technology na ndị ọzọ na nnyocha sayensị nkeji. Ọzọkwa site nke ngwá ọrụ ndekọ, niile akụkụ ndị a iduga KingHOOD si ngwá nwere ya pụrụ iche atụmatụ, ha technology IA mgbe niile na-ebute ụzọ na ụlọ ọrụ. Dị ka molekụla myọ nke echichi, nkesa ikuku eruba, mma nke akara usoro, usoro nhazi, nnukwu gas tụkwasị usoro, wdg KingHOOD si na-aga n'ihu na ngwa nke nkà na ụzụ ọhụrụ na-akwalite mmepe nke nkà na ụzụ nke na ụlọ ọrụ n'otu oge.
3, Quality na Service
Equipment si àgwà na ọrụ dị ezigbo mkpa ka ụlọ ọrụ survial, na-bụ isi maka mmepe. Anyị na-enwe ike quality management, anyị na-agbalị ka mma na-na saịtị na ọrụ. Anyị nyochaa ngwá 's nyere, ngwá debugging, ọrụ àgwà na ahịa afọ ojuju, anyị na-eme ihe ndekọ mgbe - ọrụ ndekọ maka ọ bụla ahịa. Anyị ga na-ahazi personnels ka contactcustomer na telifon, fax, email na na-na saịtị nleta. Iji mara ngwá na-agba ọsọ ọnọdụ, enyemaka ma na-eduzi ndị ahịa ịnọgide na-enwe na ngwá, na-echetara ndị ahịa na-adọ iji dochie akụkụ ahụ mapụtara. Anyị kweere na anyị nọ n'ọrụ, ngwa ngwa na ọrụ ozi ga-eme ka ihe ọ bụla anyị ahịa na-aghọta anyị echebara ọrụ.
2018 Clients Isiokwu
Clients Name Area ngwa ike
Yunnan ego Forsetry Na pulp Yunnan 10 Tọn pulp bleaching 360Nm 3/ h
Agu Forest & Akwụkwọ Group Hunan 8 Tọn pulp bleaching 350Nm 3/ h
ChiTianhua Akwụkwọ Guizhou 20 Tọn achara pulp bleaching 1400Nm 3/ h
Shaowuzhongzhu Fujian 4.5 Tọn achara pulp bleaching 400Nm 3/ h
Huaihua Juntai Hunan 40 Tọn pulp bleaching 2000Nm 3/ h
Lee Man Akwụkwọ na nkume igwe nri Chongqing 12 Tọn pulp bleaching 500Nm 3/ h
Fengli Akwụkwọ Mill Hunan 5 Tọn pulp bleaching 200Nm 3/ h
Yongfeng Akwụkwọ Mill Sichuan 12 Tọn pulp bleaching 700Nm 3/ h
Haisum technology Vietnam 10 Tọn pulp bleaching 400Nm 3/ h
Chenming otu Shandong 15 Tọn pulp bleaching 600Nm 3/ h
Danhua otu Jiangsu Enviroment nchedo 500Nm 3/ h
HSIK Wang Shan Twinking Star Hunan Oxygen -enriched agbaze 2000Nm 3/ h
Qingdao Taiwan Fiber Glass Shangdong Glass n'oké stovu Oxygen -fuel 1750Nm 3/ h
Huajin akwụkwọ Jiangxi 10 Tọn pulp bleaching 600Nm 3/ h
Zhenxing akwụkwọ Liaoning 12 Tọn pulp bleaching 700Nm 3/ h
Haisum SKD Project Bangladesh Enviroment nchedo 150Nm 3/ h
Laishan pulp na nkume igwe nri Sichuan Achara pulp bleaching 380Nm 3/ h
Kediweijing Guangdong Glass n'oké stovu Oxygen mma 400 nm 3/ h
Zhuji Akwụkwọ na nkume igwe nri Guangdong pulp bleaching 350Nm 3/ h
Xingchangsheng Jiangsu alloy n'oké 250Nm 3/ h
Yunjinglin Akwụkwọ Yunnan Pulp bleaching pulp bleaching 550Nm 3/ h
Wanjing Technology Myanmar Igbo ojii n'ihi na ọnwụ (3 tent) 50Nm 3/ h
Suzhou Zhong cai Angola Igbo ojii n'ihi na ọnwụ (2 tent) 50Nm 3/ h
Suzhou zhonghua Mozambique Igbo ojii n'ihi na ọnwụ (2 tent) 50Nm 3/ h
Shuangdeng akwụkwọ Mill Jiangsu pulp bleaching 240Nm 3/ h
SFI Malaysia Enviroment nchedo 600Nm 3/ h
SKK Philipines EAF25 Tọn 500Nm 3/ h
Xinhui ọla kọpa Xinjiang Ọla kọpa n'oké 1000Nm 3/ h
Shandong Fiber iko otu Shangdong Glass n'oké stovu 3250Nm 3/ h
Quanlin akwụkwọ Shangdong pulp bleaching 3000Nm 3/ h
Luyang Shangdong Oxygen mma combusation 500Nm 3/ h
Wuliangye Group Sichuan Glass n'oké stovu 150Nm 3/ h
Jnshan chemical Indrusty Henan Oxygen mma gas Ndinam 800Nm3 / h
Ugboro abụọ A Tailand pulp bleaching 800Nm3 / h
Longmang agbaze Sichuan n'oké 2500Nm 3/ h
Changhai otu Jiangsu Glass n'oké stovu 1300Nm 3/ h
Junlin ọgwụ Hebei Pharmaceutical Chemicals 500Nm 3/ h
Shandong Fiber Glass Shangdong Glass n'oké stovu 1400Nm 3/ h
Jiali Gas Jinagxi Glass n'oké stovu 1800Nm 3/ h
Huabei Jingmao Gansu oxygen mma 6000Nm 3/ h
Wuhai agbaze Mengu oxygen mma 4000Nm 3/ h
Huabo ebute ụlọ ọrụ Anhui ebute n'oké 3000Nm 3/ h
Shandong Fiber Glass Shangdong Glass n'oké stovu 2800Nm 3/ h
Jinhong Gas Shangdong Glass n'oké stovu 3850Nm 3/ h
Maolian Technology Tianjin Ọla kọpa n'oké 3334Nm 3/ h
inhong Gas Shangdong Glass n'oké stovu 2600Nm 3/ h
Dexing ebute Industry Jiangxi ebute n'oké 2000Nm 3/ h
Gansu Huayi Gansu ebute n'oké 1300Nm 3/ h
Jiangsu Jihua Jiangsu Wastewater ọgwụgwọ 2200Nm 3/ h
Fujain Newland Gas Tianjin Maolian Chian Railway Construction Group CO., LTD Jilin Zambia Congo Ozone generator Ọla kọpa n'okéỌla kọpa n'oké 1120Nm3 / h 4000Nm3 / h 5000Nm3 / h